ꨓ်ꨮးꨀꨣꨳ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲ ꨅိုဝ်ꨳသꨱင်ယ်ꨮꨲ ꨓ်ꨮးမိူင်းတꨯးꨟဝ်းꨓꨯꨵ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲ ꨟူဝ်လိုင်းေꨀꨣꨳ ꨁဝ်ꨳပꨣးဝꨯꨵယဝ်ꨵ။ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ်းꨟူဝ်လိုင်းꨓꨓ်ꨵ လုꨀ်ꨵတီꨳ ̒̒ꨟူဝ်လိင်း̓̓ꨓꨯသေ ဝꨤꨯးမꨣး ဝေꨣးꨟꨣꨲရ လꨰꨀ်ꨳလꨤꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨬလꨳ ꨅင်ꨲꨡွꨀ်ꨲသꨱင်ဝꨣꨳ ̒̒ꨟူဝ်လိုင်း̓̓။ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ်းꨡꨓ်တꨯးꨟဝ်း ꨡွꨓ်ꨀꨓ် ꨟွင်ꨵဝꨣꨳ ̒̒မူꨉ်ꨲတေꨣꨲ̓̓ꨡꨓ်ဝꨣꨳꨓꨓ်ꨵ ꨡွꨀ်ꨲတီꨳပွင်ꨲဝꨣꨳ ထꨤတ်ꨳꨀွင်းမူးꨓꨓ်ꨵ မꨓ်းတိုꨓ်းမီးဝꨯꨵ ထꨤတ်ꨳꨀꨰဝ်ꨳမုꨓ်ꨁမ်ြးꨕꨣးꨓꨯယူꨲ။ တမ်ꨳတီꨳ ꨓ်ꨮးမိူင်းတꨯးꨓꨯꨵ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲ မီးတင်းꨓမ် မိူꨓ်ꨓင်ꨲ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲꨟူဝ်လိုင်း၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲမိူင်းꨓွင်၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲꨀꨱင်းလိူꨓ်၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲလꨤꨯးꨁꨣꨳ၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲꨀꨤတ်ꨲꨀူꨲ၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲမိူင်းꨅိတ်ꨲ၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲမိူင်းပꨤꨯး၊ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲမိူင်းယေꨣ ꨷ ꨅိူဝ်းꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ်းေꨀꨣꨲတင်ꨳ ယုမ်ꨲယမ်ꨓပ်ꨵထိုဝ်ဝꨯꨳသꨣမꨣးသေ လꨤꨯးေꨀꨣꨲတင်ꨳမꨓ်းꨬတꨵ ထꨤတ်ꨳꨡꨓ်ယ်ꨮꨲꨡꨓ်လူင်ꨓꨓ်ꨵ တေမီးꨓ်ꨮးꨀꨤင်မꨓ်းသေ ꨀွင်းမူးသꨰမ်း သမ်ꨵတေလွမ်ꨵꨟွပ်ꨳဝꨯꨵ။ ထꨤတ်ꨳလူင်ꨓꨓ်ꨵ ပꨱꨓ်ꨕူꨳယ်ꨮꨲꨀူꨓ်းလူင် ꨁိူဝ်းꨅဝ်ꨳꨁိူဝ်းꨅွမ် ꨡွꨓ်ꨬတꨲသေ ꨀွင်းမူးသꨰမ်းꨅိူဝ်းꨓꨓ်ꨵꨬတꨵ ꨀူꨓ်းမိူင်း ꨟူမ်ꨳꨬတꨲꨅွမ်းယဝ်ꨵ။ မူꨉ်ꨲတေꨣꨲ ꨟူဝ်လိုင်းꨓꨯꨵ ꨓ်ꨮးꨬꨅꨳဝꨱင်းမိူင်းပꨱင်း […]
ပန်းအခူးခံရသူများ ဒီလိုနဲ့ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာ . . . ခရီသွားရင်း တစ်နေ့မှာတော့ လမ်းကလေးဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ . . .ပန်းခင်းကြီးတစ်ခုထဲ ဖြစ်သွာတာကို မြင်လိုက်ရတယ် . . . ပန်းခင်းကြီးဟာ . . . ဖြူ နီ ပြာ ဝါ ပန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ် . . .။ တောင်စောင်းလေးတစ်ခုပေါ်က . . . ကျယ်ပြန့်တဲ့ လွင်ပြင်ထက်မှာ အလွန်သာယာတယ် . . . ။ လေပြေလေညှင်းလေးနဲ့အတူ . . . ပန်းရနံ့တွေဟာလဲ မွေးကြိုင်နေတယ်။ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာ . . . ပန်းရနံ့သင်းတဲ့ လေညှင်းလေးကို ရှူရှိူက်ရင်း […]
ဟိုလိန်းစေတီတော်ကို ရှမ်းတွေက (မွေတော်ဟိုလိန်း) (မူရ၁်တေု,၈ှူဝ်လိုင်း)လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဟိုလင်း (၈ှူဝ်လိင်း) မျောက်ဦးခေါင်း ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကနေ ဆင်းသက်လာခြင်းပါ။ ကာလကြာတော့ ဝေါဟာရတွေ ပြောင်းလဲလာပြီး ယခုအခါ ဟိုလိန်း (၈ှူဝ်လိုင်း) ဟုခေါ်ကြတယ်။ မွေတော် မွေတော်လို့ ရှမ်းတွေခေါ်ဝေါ်ခြင်းဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဓါတ်တော်အစစ် ကိန်းဝပ်တဲ့ ဘုရားများစေတီများကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တန်ခိုးကြီး မွေတော်များ များစွာရှိကြောင်း လေ့လာသိရှိရတယ်။ မွေတော်ဟိုလိန်း၊ မွေတော်မိုင်းနောင်၊ မွေတော်ကျိုင်းလိန်၊ မွေတော်လိုင်းခ(လဲချား)၊ မွေတော် ကက္ကူ၊ မွေတော်မိုင်းစစ်၊ မွေတော်မိုင်းယော် စတာတွေဟာ ရှမ်းလူမျိုးများ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ပင်မစေတီတော်ကြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ စေတီရံငယ်တွေ များစွာ ဝန်းရံတည်ထားတဲ့ ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။ စေတီတော်ကြီးကို စော်ဘွားများ အကြီးအကဲများက တည်ထားပြီး ကျန်သည့် စေတီရံများကို ပြည်သူလူထုများက […]
̒ꨓမ်ꨵꨁူင်းꨓꨯꨵ လꨯꨳဝꨣꨳပꨱꨓ် ꨓမ်ꨵꨬမꨳယ်ꨮꨲလူင် ꨓ်ꨮးမိူင်းတꨯးꨟဝ်း ꨬမꨳꨓိုင်ꨳသေ ꨡမ်ꨲꨀꨣး ပေꨣးꨡဝ်ꨓ်ꨮးꨀမ်ꨲꨕꨣꨲဝꨣꨳꨅိုင် ꨓမ်ꨵꨁူင်းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ်ꨬမꨳꨓမ်ꨵလူင် ꨡꨓ်ꨅꨱဝ်ꨳသေပိူꨓ်ꨳ၊ ပꨱꨓ်ꨬမꨳꨓမ်ꨵ ꨡꨓ်ꨟꨤင်ꨳလီသေပိူꨓ်ꨳ ꨬမꨳꨓိုင်ꨳယဝ်ꨵ။ ꨅဝ်ꨳပꨯꨤးမွꨓ်းတꨯးꨟဝ်းꨁဝ် ꨡဝ်ꨬမꨳꨓမ်ꨵꨁူင်း ꨟꨱတ်းပꨱꨓ် တီꨳယꨓ်မꨓ်ꨳသေ ꨡွꨓ်ꨀꨓ် တꨰမ်ꨳꨡွꨀ်ꨲပꨱꨓ်ꨕꨱင်းꨀꨮꨤမ်းမꨣး တင်းꨓမ်ယူꨲ။ ꨓမ်ꨵမꨤဝ်း ꨓမ်ꨵတꨱင်းꨅိူဝ်းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨕူꨳတꨰမ်ꨳꨀꨮꨤမ်းꨁဝ် ꨡဝ်ꨟꨱတ်းပꨱꨓ် ꨀꨮꨤမ်းမꨤꨀ်ꨲꨕိင်ꨳꨬငꨳ ꨡိꨀ်ꨲတꨤင်းꨟꨀ်ꨵသေတꨣꨵ ꨓမ်ꨵꨁူင်းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨀမ်ꨵပꨣꨳꨓမ် ပိူꨓ်ꨳꨀꨯꨵ ꨟꨱတ်းꨀꨮꨤမ်းမꨤꨀ်ꨲ ꨀꨤꨓ်ꨅိူဝ်ꨵꨅꨤတ်ꨳ ꨡိꨀ်ꨲ ꨀꨤꨓ်ပꨯꨤးမိူင်းယဝ်ꨵ။ ꨓ်ꨮးꨀꨮꨤမ်းပꨤꨓ်မ်ꨮꨲꨟူဝ်ꨓိုင်ꨳꨓꨓ်ꨵ သမ်ꨵဝꨣꨳဝꨯꨵ ̒̒ꨅွင်ꨲꨕ်ꨮꨟꨣꨟꨓ်လွင်ꨳပိုꨓ်းမꨓ်း မီးမꨣးꨟꨤꨓ်ꨵတေꨣꨲ ထိုင်ယꨤမ်းလꨱဝ်꨸ ꨓꨯꨬလꨳ ꨕူꨳတꨰမ်ꨳလိꨀ်ꨳ ꨁ်ꨮꨳတꨰမ်ꨳꨬꨓ လွင်ꨳပိုꨓ်းꨓမ်ꨵꨁူင်းꨓꨓ်ꨵ ပွတ်းꨡွꨓ်ꨲတွꨓ်ꨳꨓိုင်ꨳယူꨲ။ ꨓမ်ꨵꨁူင်းꨓꨯꨵ ꨟူဝ်မꨓ်းꨬတꨲမꨣး တမ်ꨳတီꨳ လꨯွတꨤꨓ်ꨲꨀလꨣꨲ (လꨯွမူꨉ်) ꨡꨓ်မီး ဝꨓ်းꨡွꨀ်ꨲ မိူင်းတိပꨰတ်ꨵသေ လုꨀ်ꨵꨕꨯꨤꨲတူꨀ်း လꨯꨀꨮꨣꨲꨕꨯꨤꨲꨡွꨀ်ꨲယဝ်ꨵ။ သိုပ်ꨲလꨯꨁဝ်ꨳမꨣး ꨓ်ꨮးမိူင်းꨬꨁꨲ […]